दाँतसम्बन्धी उपचार अर्बन स्माइल्समा - GBM
भैरहवाको नारायणपथमा अर्बन स्माइल्स डेन्टल क्लिनिक सञ्चालनमा आएको छ । भैरहवा र यस आसपासका क्षेत्र साथै छिमेकी जिल्लाहरु कपिलवस्तु, नवलपरासीका सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित अर्बन स्माइल्स डेन्टल क्लिनिक नारायणपथबाट सेवा सुरु गरेको छ । क्लिनिकले भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना सेवाबारे जानकारी गराएको छ ।
दाँतको सुरक्षालाई नै मध्यनजर गरी बढी भन्दा बढी सर्वसाधारणमा गुणस्तरीय दन्त सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित अर्बन स्माइल्स डेन्टल क्लिनिकको सुरु गरिएको प्रबन्ध निर्देशक डा. जुही अग्रवालले बताइन् । ‘मेरो नेतृत्वमा दन्त चिकित्सकहरुको विशेषज्ञ टोलीसहित सेवा सुरु गरेका छौं । विशिष्टीकृत सेवाका लागि एम.डीएस. डा. सिनिग्धा सुभम् र रभिस मिश्राको टिम रहेको छ । दाँतको जस्तो सुकै समस्या उहाँहरुबाट उपचार हुन्छ, ’उनले भनिन् । क्लिनिकमा दाँतका सबै उपचार हुने उनले जानकारी दिइन् ।
क्लिनिकमा दाँतको एक्सरे, दाँत सफा गर्ने पोलिस गर्ने, दाँतमा रंग भर्ने, दाँत सेतो बनाउने, दाँतमा गहना लगाउने, दाँतमा क्राउन र पुल, रुट केनल विधिको उपचार, डेन्टल इम्प्लान्ट (दन्त प्रत्यारोपण), अर्थोडेन्टिक उपचार, दाँतको बीचको भागको फिलिंग, सुन्निएको गिजाको उपचार, गिजाको पिप फाल्ने, बालबालिकाको दन्त उपचार, बुद्धि बंगाराको उपचार एवं फाल्ने लगायतका सेवा उपलब्ध रहेको उनले बताइन् । दाँतको उपचार खर्च रकम आम सर्वसाधारणको पहुँच भित्रै रहने गरी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘दाँतको उपचारमा आउनेहरुको लागि सुरुवाती अवसरमा माघ महिनाभर १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । फ्लोअपमा आउनेहरुका लागि छुट्टै सुविधा, विशिष्टीकृत सेवा सहित आम सर्वसाधारणको दाँतको उपचार गर्न हाम्रो उपस्थिति हो, ’उनले भनिन् ।
त्यस्तै माघको ८ गतेबाट प्रत्येक शनिबार बिहान निःशुल्क डेन्टल क्याम्प समेत लगाउने र यसबाट सर्वसाधारणले थप फाइदा लिने क्लिनिकको विश्वास छ ।
← एमालेको प्रदेश अधिवेशन २० दिन पर स¥यो
प्रयोगशाला उपकरण हस्तान्तरण →
२०७८ पुष २७ gautam buddha sandesh	0
‘छत्रदेव गाउँपालिकाको काम नमुना’